Coupe MLS à Seattle: une ville en proie aux sueurs nocturnes - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Koobkii MLS ee Seattle: waa magaalo ay ku dheceen dhidid habeenkii
SEATTLE - Seattle waxay aad ugu waalan tahay finalka MLS Cup ee axada (15 h 00 HE, live ABC ) inta udhaxeysa gacaliyeyaashiisii ​​Sounders iyo Toronto FC? Kuraasta 69 000 iyo inbadan oo ka socota CenturyLink Field ayaa la iibsaday wax ka yar seddex saacadood ka dib markay iibka qaateen. Laga bilaabo subaxnimadii Sabtida, waxay wali suurtogal u ahayd helitaanka tigidhada dukaameynta ka dib - in kabadan 1 000 dollars midkiiba.
Laakiin intii lagu jiray kalfadhiga jimcaha, diiradda ayaa lagu saaray lambarka 20 halkii loo isticmaali lahaa 69 000. Taasi waxay ku saabsan tahay imisa jeer oo Sounders iyo nalal kale oo Seattle ah ayaa isugu yimid si ay uga qeyb galaan tababar kooxdii labaad ee ugu dambeysay ee ka dhaca agagaarka Tukwila.
Alan Hinton, oo hogaaminayey Sounders xilligii NASL, ayaa abaabulay kulanka kaas oo ka warramay waxyaabihii ay kooxdu soo martay. Difaaca hore Jimmy McAlister ayaa goob joog ahaa. Sidaas oo kale ayay ahayd Wade Webber, oo ka soo baxay 'Sounders of A-League'. Waxaa jiray Danny Jackson iyo Chance Fry iyo tababbaraha ragga ee Jaamacadda Seattle Peter Fewing, kuwaas oo si adag ugu shaqeeyey Seattle Storm ka dib markii NASL la waayey. Xusuusnow, kuwani ma noqon karaan magacyo la yaqaan, laakiin waa qayb muhiim ka ah isboortiga Seattle. Ma ahan wax aan caadi aheyn midkood inuu arko Sounders hore oo tagaya tababarka. Waqti kasta oo aan Seattle aado, waad arki kartaa iyagoo ka qeyb galaya howsha, in kasta oo fursadda Axadda ay noqon karto mid qaas ah.
"Waxay u egtahay sidii dhalasho, runtii," ayuu yidhi Hinton. Waxaan u imid inaan Tababaro Sounders bishii Nofembar 1979. Waxaan qabnay sanad aad u wanaagsan iyo sannado badan oo wanaagsan. Markaa waa wax ku habboon in Bishii Nofeembar 2019, aynaan u ahayn uun in aannu u aadno finalka waddankeenna. Tababarahayagu waa wiilka aan shaqaaleysiiyay markii aan ahaa 17 da'da Nofeembar 1979. Wali waa halkaan, wuxuuna qabanayaa shaqo aad u wanaagsan. Aniga ahaan, waa maalin farxad leh Seattle. "
"Wiilka" dabcan. waa maareeyaha Seattle Brian Schmetzer, oo u ciyaara Sounders inka badan qof kasta. Wuxuu kooxda u ciyaaray kulankiisii ​​ugu horreeyay ee NASL, wuxuu gacanta ku hayey heerka labaad, wuxuu gacan yare u ahaa Sigi Schmid, ka dib wuxuu la wareegay billadda bartamihii 2016 wuxuuna ku hogaamiyay kooxda Koobka. MLS sanadkan. Joogtaynta xiriiriyaasha kooxdii hore waa waxa ka dhiga Sounders marka laga reebo inta badan walaalahooda MLS. Waxaa jira xoog, rabitaan rabitaan ah oo dhaafsiisan kooxda koowaad. Taasi waa waxa badbaadiyay Sounders, xitaa daqiiqadihii ugu mugdiga badnaa taariikhda isboorti.
“Waxaan u maleynayaa inay aad muhiim utahay, sababtoo ah wareegtadan ayaa noqon laheyd halka Alan Hinton uusan joogin, Pepe Fernandez iskuma dhejin, Dave Gillett, Frank Barton, Neil Megson, Bernie James, I ogaada in magacyada kale ee 12 ay iga maqnaan doonaan, ”ayuu yidhi Schmetzer. “Waxaan heysanaa xiriirkan, xaqiiqda ah inay ahaayeen ciyaartoy, ka dib waa ay baxeen, waxaana ay ku xoojinayaan qeybahooda yaryar ee adduunka sida weyn ee loo yaqaan 'Sounders' iyo waxa ay la micno tahay noqoshada xirfadleyda kubada cagta."
Xiddiga khadka dhexe Sounders Cristian Roldan waxaan xasuustaa in dhexgalka sheekada Sounders uu biloowday xilli ciyaareedkiisii ​​oo dhan.
"Schmetz ayaa dhinac iga jiiday wuxuuna i weydiiyay," Ma taqaanaa ninkani yahay? “Isna meel buu i gelinayaa, ayuu yidhi. Waxay ahayd inaan barto magacyada dadkaas oo dhan si aan u dareemo inay qayb ka yihiin kooxda. ”
Waxaan sidoo kale aqoonsannahay inta hormuudku u koray. Webber wuxuu ku qaatay xilliyada MLS 1998-1999 xilli Miami Fusion ah. Wuxuu ugu yeeraa wixii dhacay wixii ka dambeeyay, Seattle iyo meelo kaleba, "jahwareer".
"Markii aan ka tagay MLS 1999, waxaan u maleynayay inay dhimanayaan," ayuu yiri Webber, oo hadda ah kaaliyaha macallinka Tacoma Defiance. "Waxaa jira dhalaalaya fara badan hadda, oo aan ahayn alaabooyinka been abuurka ah ee waagii 96. Magaalada waxaa ka jira buul dhab ah. Wuxuu nabad kaheystay dunidan. "
In kasta oo fiirogaar ah loo haystay toddobaadkan, haddana in ka badan fikirka gudbinta ayaa loo daayaa nin aan ahayn. Waxay ahayd Schmid kii ku dhiirrigeliyay Sounders xilligii MLS, isaga oo siiya kalsooni deg deg ah isagoo ku guuleystay afar koob oo ah Koob Furan ee Mareykanka iyo Xeellaha Taageerayaasha 2014. Waxaa laga eryay bartamihii xilli-ciyaareedkii MLS Cup ee 2016 wuuna dhintey Disembar la soo dhaafay. Khatar ma leh in la iloobi doono.
Seattle waxaa ku xayiran socodsiinta finalka MLS Cup ee Axada finalka u dhexeeya Sounders iyo Toronto FC. Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports
Hinton ayaa yidhi: "[Schmid's] waxay saameyn weyn ku yeelatay naadigan, saamaynta ay ku leedahay Brian". “Sigi wuxuu ahaan lahaa mid faani kara. Weli waan u xiisay. ”
Schmetzer wuxuu shaqadan dheer helay tan iyo markiisii ​​seddexaad ee MLS Cup final, booskiisa Seattle waa la hubaa. Maalinta ciyaarta ayaa loo badin doonaa inay kacsan tahay Schmetzer, laakiin wuxuu qirtay inuu waqti ku qaadan doono inuu aamusnaan ku siiyo macallinkiisii ​​hore.
“Marka ciyaartu bilaabato, waa inaan diirada saaraa,” Schmetzer ayaa yidhi. “Laakiin markii [goolhayaha] Tommy Dutra iyo anigu aan garoonka kusoo baxno, waxaan ka fikiri doonaa Schmid.”
Tani waa markii saddexaad ee afar sano gudahood ay Toronto iyo Seattle isku dhacaan finalka. Rajada ah inaad ka hor ciyaarto dadbadan oo caynkaas ah ayaan si gaar ah niyad jab ugu noqon doonin Reds. Waa koox ciyaaray ciyaaro waaweyn iyo deegaanno cadaawad leh, gaar ahaan ciyaartii finalka Champions League ee CONCACAF 2018, halkaasoo ay u dirtay ciyaartoy sida kooxda reer Mexico ee Tigres iyo Club America. 2019, Toronto waxay horeyba u tirtirtay New York City FC iyo Atlanta United, oo galay darajo sare, wadada.
Waan fahamsanahay waxa maalmahan yihiin. Waxaan isku daynay dagaalka, ”Kabtanka Toronto Michael Bradley ii sheegay. “Micnaheedu maahan in wax walba ay si hagaagsan u socdaan, xitaa haddii aan isku dhow nahay, laakiin waan ognahay sida loo maro waqtiyada qaar.”
Toronto waxay inta badan diiradda saareysaa xaaladda weeraryahan dhaawacmay Jozy Altidore . Wuxuu qirtay ESPN inay qaadanayso "mucjiso" inuu ciyaaro. Toronto runtii uma halgamin maqnaanshihiisa, iyadoo Alejandro Pozuelo taas oo dhibaatooyin badan u keenta kuwa ka soo horjeedda isaga oo u shaqeynaya sidii 9 been abuur ah. Tani kama hortagayso saxaafada isku soo ururtay inay raacaan dhaqdhaqaaq kasta oo Altidore inta lagu guda jiro diirimaadka jimcaha ama agaasinka rajo gelinta Greg Vanney su’aalo la xiriira caafimaadka qofka weerarka geystay.
Kaliya maahan in Vanney kajawaabto su'aalahan, laakiin wuxuu xitaa awoodaa inuu ku qoslo saameynta uu kuleeyahay dharka ciyaarta loo yaqaan MLS. In kasta oo jaakada maqaarka ah ee uu xirto maareeyaha kooxda FC Dallas ee Schellas Hyndman inta lagu gudajiray kooxdii u soo gudubtay finalka 2010 ay weli ku jirtay meesha ugu sarreysa miiska MLS Managerial Fashion, dharka Vanney ayaa guuleystay. caan ku ahaa, gaar ahaan ka dib markii ay xirtay gudaha guushii ugu dambeysay ee Shirka Bariga ee ka dhanka ahaa Atlanta United.
"Waxaan hadda ugu yeedhnaa" Kuxigeenka Vanney, "ayuu yidhi Dylan Doyl, 35, kaasoo, marka lagu daro ururinta lacagaha loogu uruurinayo hay'ad aan macaash doon ahayn oo reer Kanada ah, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxdii taageertay TFC, Libaaxyada waqooyiga. Bilowgii sanadka, wuxuu ku xirnaa qalliinka dabaysha Panama. Hadda wuxuu leeyahay gadh cirro leh, timihiisuna waa soo noqdeen, madaxana wuu la haystaa, wuxuu umuuqdaa inuu ka qalin jabiyay dambi baadhe ilaa taliyihii hore. "
Bilowga ciyaarta, iyadoo ciyaaruhu ka socdaan magaalooyinka Toronto iyo New York, foulard-ku wuxuu ahaa mid ku habboon. Xaqiiqdii xaqiiqdii maa aysan aheyn Atlanta, laakiin Vanney ma uusan dooneynin inuu jabiyo mid ka mid ah sharciyada udub dhexaadka u ah isboortiga iyo jahwareerka iyada oo ay jiraan guulo isdaba joog ah.
"Magaalada Atlanta, waxaan eegay tababbarayaasha kale waxaan iri dhaha" Runti ma gashan karaa madaxa xijaabka? Runti ma macquulbaa? Waxay naftooda ku yiraahdeen, Waa inaad sameysaa. Markaa waan xirtay, ayuu yidhi Vanney. "Laakiin qiyaastii seddex meelood meel ciyaarta, waxaan mooday," Waa kuleyl halkan, waxaan bilaabayaa dhidid. Waan luminayaa miyirka. "Sidaasi darteed waan iska fogeeyay qeybta ugu dambeysa ciyaarta. Ma ihi wax la yaab leh. Waa wax iska caadi ah oo aan raaco oo tababarayaashu sidoo kale way ila hadleen. "
- Twellman: Sababta garoonka asalka ah | Lodeiro furaha
- N. Davis: Koobkii MLS: waxaas oo dhan waa la la'yahay bilowgii Pozuelo
- Carlisle: Spotlight on Schmetzer, Tababaraha badbaadada Seattle
- Wadada MLS Koobka: Toronto | Seattle
- Qiimaha Kale ee 2019 | tigidhada
Taageerayaasha sida Doyl, xaqiiqda ah in finalkaani ka dhaco Seattle, marka loo eego Toronto, waa hal heer, ka raaxo badan. Shaqo macno yar iyo helitaanka tikidhada way adag tahay, in kasta oo kooxdu u aragtay mid ku habboon inay ugu deeqaan ku dhawaad ​​$ 400 gaari wadida cuntada ee aagga Seattle. In kasta oo qiraya in isaga iyo asxaabtiisi dhexdoodaba, ay jireen "sawaxan dareemayaal ah", haddana waxaa jirta farxad.
Waxay la mid tahay daaweynta kooxeed, waxaad horay uga sii shaqeyn doontaa dareemayaashaada. Waxay naafeysaa neerfayaasha, ”ayuu yiri quraacda. "Oo iska cad, waad walwalsan tahay sababta oo ah adiga oo aadan ogeyn sida ay wax u socdaan. Laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay in aan galo garoonka oo aan bilaabo. Maalmaha maqnaashada maadaama taageerayaashu ay yihiin kuwa ugu fudud. " Seattle, waxaa muuqata inay jirto halis badan, ugu yaraan shucuur ahaan. Ciyaartoygu ma doonayaan inay hoos u dhigaan taageerayaashooda, oo la siiyo dadka badan, waxaa jira ku dhawaad ​​waajib ayaa ah inay guuleystaan. Xiisadan ayaa laga dareemayaa xitaa ardayda hore ee Sounders.
“Xaaskeygu waxay haysay riyo walaac ah xalay,” ayuu yiri Webber. Waxay kacday iyada oo moodaya inaan lumay. Waxay ku toosay dhidid qabow. Waa wax lala yaabo in dadka 70 000 ay leeyihiin dhidid habeenkii. "
Waxay hadda sii ahaataa wax ka yar saacadaha 24 ka hor inta aan la sii deyn tamarta dareemahan.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/major-league-soccer/story/3986153/mls-cup-in-seattle-a-city-collectively-experiencing-night-sweatsremembering-sigivanney-explains-his-fashion-sense
Wadahadalka LIVE: Spurs ayaa qorsheyneysa ficil cajiib ah Man Utd inay diido Depay
5 XAALADAHA Xilliga Cagaha 2019 - VIDEO
Royal Rebel: Siday Meghan Markle iyo Kate u booqdeen koox London ka dillaacday
India: Kadib shirkii BRICS, Raiisul wasaare Modi wuxuu aaday dalka | Wararka Hindiya